Sida loo fahmo haddii qof noo basaaso makarafoonka (PC iyo casriga) smartphone Emulator.online ▷ 🥇
Qarsoodiga wanaagsan wuxuu noqdey mid sii adkaanaya in la gaaro, qaasatan markay nagu hareeraysan yihiin aalado elektiroonig ah oo awood u leh inay qabsadaan waqti kasta wax kastoo aan dhahno ama dhawaaqyada ka imanaya deegaanka aan ku nool nahay ama ka shaqeyno. Haddii aan si gaar ah uga walaacsan nahay arrimahayaga gaarka ah oo aanaan doonaynin in nala maqlo ama nala basaaso iyada oo loo marayo makarafoonka kombuyutarkayaga ama casriga, tusahan waxaan ku tusi doonaa sida loo ogaado haddii qof uu noo basaasayo makarafoonka, adoo ku sameynaya dhamaan jeegaga lagama maarmaanka u ah Windows 10 PC-yada, Macskeena ama MacBooks-ka, taleefannada casriga ah ee Android ama kiniiniyada iyo iphone / ipads.
Dhamaadka jeegga Waxaan hubin doonaa inaanan haysan wax "basaasid ah" codsiyo ama codsiyo ah oo isticmaala rukhsadda gelitaanka makarafoonka annaga oo aan oggolaan. (ama waxaa laga yaabaa inay heleen ogolaanshaheenna markii aan degdegnay, iyagoo ka faa'iideysanaya dushayada).
AKHRISO: Ka ilaali kombuyuutarkaaga kumbuyuutarka iyo makarafoonkaaga si aad uga fogaato in lagu basaaso
Sida loo xaqiijiyo adeegsiga makarafoonka
Dhammaan kombiyuutarada casriga ah iyo aaladaha elektaroonigga ah waxay bixiyaan ikhtiyaarro si loo hubiyo in qof na ku basaasayo makarafoonka: xaaladda hadda taagan, way adag tahay in lagu basaaso makarafoonka iyada oo aan la isticmaalin isdhexgalka ugu yar ee isticmaalaha (waa inuu rakibaa arji ama guji xiriirin gaar ah oo lagu bilaabayo basaasnimada) ama iyada oo aan la helin farsamooyin jabsi oo aad u horumarsan (lagama maarmaan u ah in la hareer maro kontaroolada ay sameeyaan nidaamyada hawlgalka). Waxaas oo dhami waa ansax ilaa aynu ka hadlayno dhageysiga deegaankaXaaladahan oo kale qaababka loo basaaso dadka aad bey u kala duwan yihiin waxaana adeegsada booliska iyadoo amarka garsoorka lagu basaaso tuhmanayaasha.
Sida loo hubiyo makarafoonka Windows 10
Windows 10 waxaan ku xakameyn karnaa barnaamijyada iyo barnaamijyada marin u heli kara makarafoonka websaydhka ama (makarafoonada kale ee ku xidhan) adoo furaya liiska bilowga ee bidixda hoose, adigoo gujinaya Xeerarkariixaya liiska Intimidad iyo furitaanka liiska Microphone.
Ka gudubida daaqada waxaan awoodi doonaa inaanu ilaalino ogolaanshaha helitaanka makarafoonka labadaba codsiyada laga soo dejiyey Microsoft Store iyo barnaamijyada dhaqameed; Marka ugu horeysa, waxaan ka fureyn karnaa gelitaanka makarafoonka si fudud anaga oo ka fureyno badhanka ku xiga magaca arjiga, halka xaalada barnaamijyada dhaqameed aan ku qasbanaaneyno inaan furno barnaamijka laftiisa oo aan badalno qaabeynta qaraabada makarafoonka. Hadaan rabno hel asturnaanta ugu badan oo u daa marin u helka makarafoonka kaliya barnaamijyada "nabdoon", waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad barkinta ka joojiso biilasha ku xiga codsiyada ka tirtir barnaamijyada laga shakiyo ama aan garanaynin halka ay ka yimaadeen. Si loo sii xoojiyo dhinacan waxaan aqrin karnaa hageheena Sida looga saaro barnaamijyada gacanta iyadoon raadad ama khaladaad lahayn (Windows).
AKHRISO: Basaas kombuyuutarka oo arag sida kuwa kale u isticmaalaan
Sida loo hubiyo makarafoonka ku jira Mac
Xitaa nidaamka qalliinka ee Mac iyo MacBooks, taas oo ah, macOS, waan iska hubin karnaa haddii qof uu noo basaasayo makarafoonka si toos ah goobaha. Si aan u sii wadno waxaan daarnaa Mac-keena, waxaan riixnaa astaanta Apple ee qaniinay qeybta bidix ee kore, waxaan fureynaa liiska Nidaamka doorbididaguji icon Amniga iyo asturnaanta, xulo tab Intimidad ugu dambayntiina aan aadno liiska Microphone.
Daaqada waxaan ku arki doonnaa dhammaan codsiyada iyo barnaamijyada codsaday helitaanka makarafoonka. Haddii aan helno barnaamij ama codsi aanan garanaynin asalkiisa ama in aysan jiri doonin, waxaan ka saari karnaa calaamadda jeeg ee ku xigta magaceeda isla markaana, markii la aqoonsado, waxaan sidoo kale sii wadi karnaa inaan ka saarno adoo furaya arjiga. Baadiyeadigoo gujinaya meesha aad kahesho Aplicaciones dhinaca bidix, helitaanka barnaamijka basaasnimada iyo, adigoo gujinaya midig, ku sii wad joojinta adoo riixaya U dhaqaaq qashinka.
Sida loo hubiyo makarafoonka ku jira Android
Aaladaha casriga ee Android iyo kiniiniyada waxay u muuqdaan inay yihiin aaladaha ugu fudud ee lagu basaaso tan iyo markii nidaamka qalliinka had iyo jeer maahan mid cusub Iyo, marka loo eego isticmaalkiisa baahsan, qof kastaa si taxaddar leh uma hubiyo in barnaamijyada rakibani ay basaasayaan makarafoonka. Si aad u hubiso codsiyada rukhsadda u haysta helitaanka makarafoonka qalabkeenna, fur arjiga Xeerarka, aan aadno liiska Asturnaanta -> Maamulka ruqsadda ama Liiska Amniga -> Ogolaanshaha ugu dambayntiina ku riix liiska Microphone.
Shaashadda furaysa waxaan ku arki doonnaa dhammaan codsiyada codsaday helitaanka makarafoonka ama haysta rukhsad laakiin aan weli "ka faa'iideysan". Haddii aan aragno codsi kasta oo la yaab leh ama aan xasuusanno inaan rakibnay, waxaan ku sii wadi doonnaa adigoo ka saareyna hawlgelinta makarafoonka (kaliya riix batoonka ku xiga magaca dalabka) isla markaana isla markiiba ka saar arjiga shakiga leh, si looga fogaado hawlgallada soo socda Marka la eego waxaan akhrin karnaa hageheena Ka tirtir barnaamijyada ku saabsan Android gebi ahaanba, xitaa hal mar.
Haddii aan dooneyno inaan helno macluumaadka muuqaalka ah ee barnaamijyada gala makarafoonka, xitaa marka aanan isticmaaleynin barnaamijyada sida cad u adeegsanaya makarafoonka, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad rakibto barnaamijka Helista Dots ee bilaashka ah, oo siisa bar yar oo dhalaalaya geeska kore ee midig. mar kasta oo codsi ama hawlgal ay helaan makarafoonka iyo kamaradda.
AKHRISO: Hubi / basaas qof kale taleefankiisa (Android)
Sida loo hubiyo makarafoonka iPhone / iPad
On iPhone iyo iPad, iyadoo imaatinka macruufka 14, jawaab celin muuqaal ah oo ku saabsan marin u helka kamaradda ama makarafoonka ayaa lagu daray: xaaladahaan dhibic liin yar, casaan ama cagaar ah ayaa ka soo muuqan doona midigta sare, si aad isla markiiba u ogaato in qof uu noo basaasayo makarafoonka.
Marka lagu daro xaqiijintaan deg dega ah, waxaan had iyo jeer xakameyn karnaa codsiyada gala makarafoonka aaladaha Apple adoo furaya arjiga. Xeerarka, adigoo riixaya liiska Intimidad, iyo shaqsi ahaan xaqiijinta barnaamijyada galaya makarafoonka, naafada ka dhigaya kuwa aynaan garanayn ama aanaan waligeen rakibin. Si aad kor ugu qaadno asturnaanta markaad isticmaaleysid iPhone, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aqriso hagaha Dejinta asturnaanta ee iPhone-ka ayaa loo hawlgelin doonaa si loo ilaaliyo.
AKHRISO: Sida loo basaaso iPhone
Basaasida makarafoonka ayaa ah mid ka mid ah ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo yaqaan 'hackers', basaasiinta ama dambi baarayaasha, waana sababtaas awgeed nidaamyada hawlgalka ayaa noqday kuwo aad u xulasho badan marka ay timaado bixinta ogolaanshahan. Had iyo jeer way fiicantahay inaad la tashato menusyada iyo codsiyada kor lagu soo arkay, in had iyo jeer la ogaado haddii qof uu noo basaasayo makarafoonka, laga yaabee inuu soo qabto macluumaadka shakhsiyeed ama sirta warshadaha.
Haddii aan ka baqeyno in aan ku helno codsi basaas taleefanka ah, waxaan raadineynaa joogitaanka mid ka mid ah codsiyada lagu arkay hagayaashayada. Codsiyada ugufiican ee lagu basaaso taleefannada gacanta (Android iyo iPhone) mi App wakiil sir ah oo loogu talagalay Android si ay u basaasaan, ula socdaan goobaha, farriimaha iyo inbadan.
Haddii, liddi ku ah, waxaan ka baqeynaa in basaasidda makarafoonnada lagu fuliyo fayrasyada Android, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad akhrido maqaalka Soo hel oo ka saar spyware ama khayaanada Android.
Xogta Wareejinta ee Taleefanka ee Huawei Phone iyo Faylal loogu talagalay Smartphone cusub